Google Earth; qalabka muuqaalka ee sawir qaadayaasha - Geofumadas
Mee, 2011 Cartografia, Baridda CAD / GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Google Earth, ka sokow inuu yahay qalab madadaalo ah dadweynaha guud, sidoo kale wuxuu noqday taageero muuqaal ah oo loogu talagalay kartoonka, labadaba si loo muujiyo natiijooyinka iyo in la hubiyo in shaqada la qabanayo ay tahay mid joogto ah; ma aha in lagu yiraahdo aaladda barbaarinta juqraafi ama fasallada geodesy.
Xaaladdan oo kale waxaan ka caawin doonaa Manifold GIS si loo dhiso afar-geesoodka iyo Google Earth si loo hubiyo natiijooyinka, iyadoo laga faa'iideysanayo layli aan isla soo saarnay oo lala yeeshay Cristian Mejía, oo ah sahamiyaha ka socda Sucre oo caawimaaddiisa la fuliyay. Mabda 'ahaan, waxaan u baahanahay inaan qeexno aag aan ka shaqeyn doonno, arrinta Bolivia, waxay u dhaxeysaa aagagga 19, 20 iyo 21; iyo durdurrada 8 iyo 24 digrii, oo ku yaal koofurta koonfureed. Waxaas oo dhan waxaa looga soo jiidan karaa Google Earth kormeer fudud, beddelida ikhtiyaarka si aad u aragto UTM si loo arko aagagga iyo joqraafiga si loo arko ciriiriga iyo dhererka.
1. Rubuca saddexda meelood ee xiisaha leh.
Manifold waxaa lagu sameeyaa Eeg> shabakadda
Kadibna waxaan muujineynaa inaan rajeyneyno afar meelood oo ka imanaya Longitude -54 ilaa -72, way taban yihiin maxaa yeelay waxay ku sugan yihiin cirifka galbeed. Iyo loolka aan dooranay inta udhaxeysa -8 iyo -24, wali wey ku xun yihiin ka hooseynta dhulbaraha.
Waxaan sidoo kale tilmaameynaa sida aan u kala qaybinayno; cabbirka buuxa waa 18 (3 6 isdabamarin) Longitude iyo 16 (2 jeer 8 darajo) loolka. Waxaan ku tusinaynaa inaad na aaminsan tahay faybar halkii khadadka fudud laga dhigi lahaa. Halkaasna waxaan ku leenahay saddexda aag, sida kor ku xusan Google Earth ,. Si loo tijaabiyo, waxaan si sax ah u gujineynaa lakabka oo waxaan u dhoofineynaa kml, taasoo ka dhigeysa muuqaalka muuqaalka mid caqli gal ah in shaybaarka geodesy 20 sano ka hor ay adagtahay in la fahmo.
2. Khariidadaha 1: 250,000
Tusaale ahaan, waxaan u socon doonnaa aagga 20 si isku mid ah. Xaaladdan oo kale, xaashiyaha 1: 250,000 waxay leeyihiin cabbir ah 1.5 x 1 digrii, oo u dhiganta u qaybinta aagga oo dhan 16 x 4 matrix ah faybar.
Waxaan cadeyneynaa in hadda aan rabno kaliya kaliya shabakada u dhexeysa dhererka 60 iyo 66, iyo Hoosta 8 ee 24; taas oo muujineysa in shahaadooyinka 6 loo qaybin doono qaybaha 1.5 iyo qaybaha fasalada 1.
La dhammeeyay: si aad u hubiso, midig u guji una dhoofiso kml. Muuqaalka lat / dheer waxaad ku hubin kartaa haddii xariiqyadu ay u dhigmaan shabakadda Google Earth.
Si loogu daro 'centroids', dhammaan dusiyeennada waa la xushay, waxaana lagu dabaqayaa howsha juqraafiyeed, sida ku cad shaxanka soo socda. Muhiim ma aha in la sameeyo lakab kale, maaddaama Manifold ay taageerto noocyada kala duwan ee walxaha ku jira, haddii aad rabto inaad u dirto mid kale, waa inaadan xitaa dooran iyaga maxaa yeelay waxaa lagu abuuray xulasho firfircoon si markaa kaliya gooyo / goynta.
3. Khariidadaha 1: 100,000
Xaaladdan, wax isbeddel ah kama badna xuduudaha, shahaadada 1.5 waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood, markaa waxay joogaan 0.50 x 0.50.
4. 1 khariidadaha: 50,000
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in lakabka xiga uu u qaybsan yahay qaybo ka mid ah 0.25 x 0.166667, tan iyo markii aan u qaybinayno 2 x 3 matrix, sida lagu arkay natiijada kama dambaysta ah. Midigta lakabyada ayaa lagu muujiyay, galka gudihiisa iyo hoostooda gudaha khariidad, sida sida aan u sharaxno hal maalin.
Tani waxay noqoneysaa sida Google Earth, waxaan sameyn karnaa markasta oo dhan, aagga oo dhan, hase yeeshee ma fududa, sababtoo ah waxaan u baahannahay inaan u beddelno UTM iyo tan waxaa loo sameeyaa lakabyo kala geddisan.
Waa funny in faylka Manifold .map oo ku jira dhamaan lakabyada, kaliya waxay cabbiraan 85 kb iyo Google Earth 59 kb.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa faylka qaab .map ee Manifold GIS iyo .kmz ee Google Earth.
Ugu dambeyntiina, tan oo aan sameyn lahayn Google Earth waxay u baahnaan lahayd waqti badan oo dheeri ah oo hubin aan la taaban karin iyo shaki ah khalad suurtagal ah. Sawirada Google ma noqon doonto mid sax ah, laakiin sida aaladda barbaarinta waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan oo ku saabsan heerka uu farqiga u leeyahay qaababka caadiga ah in yar oo ka yar xafladaha xafiisyada.
Post Previous" Hore UTM waxay isku duweysaa khariidadaha google
Post Next Soo qaado sawirrada iyo qaabka 3D ee Google EarthNext »
19 Jawaabo "Google Earth; taageerada muuqaalka ee sawir qaadayaasha "
Orlando isagu wuxuu leeyahay:
Ma haystaan ​​boosaska booska sawir qaadayaasha?
Waxaan u maleynayaa waxaad rabto inaad sameyso PlexEarth, si aad u eegto, waa hubaal inaad xalliso adigana waxaad ku socotaa AutoCAD
Shirley isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhoofsadaan image ah ka soo Google Earth in AutoCAD sida AutoCAD waxaan haystaa contours ee dalka jecelyihiin in lagu calaamadiyo image dhulka G. laakiin GOS in heerkee baan ka heli xirneeyn on image si aan u qaadno haddii ma i caawin kartaa
Nooca ugu dambeeyay ee Google Earth luminta xidhiidhkan:
Xulasho kale ayaa ka socota Google Earth, u gudub "Caawinta, hubi wixii cusboonaysiinta" ikhtiyaar, hubi haddii uu jiro nooc cusub marka loo barbar dhigo midka aad hore u leedahay oo kala soo bixi mid cusub haddii aad go'aansato.
Waxaan qiyaasayaa haddii Manifold uu sidaas sameeyo, ArcGIS inay awoodi karto. In kasta oo aanan waligey ku sameyn barnaamijka softiweerka 'ESRI'.
wakiil g!, Waxaan horay u soo dajiyay version ah ee Google 6.5, bogga aad ka soo bixi kartaa casriyeynta?
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la istcimaalo oo keliya si loo dhoofiyo lakab kasta ama sawir kasta oo aad u isticmaasho, ma ka shaqeyn kartaa barnaamijyada kale ee Arcgis?
Nasiib daro, uma maleynayo inay jirto xaalad sidan oo kale ah.
Waa inaad tagtaa maxkamad iyo qalad.
doon fuul isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid mahad, waxaad kugula talin kartaa baritaan si aad u awooddo inaad sidaan u sameyso macnaha mitirka mitir laba jibbaaran
Xaqiiq. Tan darteed waa inaad haysataa sawirka leh saadaasha UTM, ka dib guddiga xarkaha wuxuu ka muuqan doonaa ikhtiyaarka abuuritaanka koronto mitir.
Waad saxdaa qaladkeygii aan ku shaqeyn lahaa khalad aad u badan.
Waxaa jira hab aan ku sameyn karo cabbirka saxda ah sida mitirka laba geesoodka ah ee 100 ie ie shabakad ama jajab ah mitirka labajibbaaran ee 100.
Waxaan soo dejiyey feylka tusaalaha, sidaa darteed waa la soo dejin karaa.
Taasi waa sax, sameysid sawir cusub oo soo bandhig, adigoo laba jeer riixaya.
Kadibna waxaad sii wadi doontaa shabakadda.
Isku day in aad aragto kala duwanaanshaha adigoo isticmaalaya:
Muuqaal / sawir
Midkiina waa inuu ahaadaa mid fiican.
Hada, sidee ayaad u samaynaysaa, laakiin kiiskeyga, ma shaqeynayo si sax ah? Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah liiska meesha uu ku yiraahdo DEGREE, ka dib markaan riixo shabakada, ma shaqeynayo; Waxay ka baxaysaa iyada oo la isdaba-taago in la geliyo oo ma aha ikhtiyaarka DEGREE ee noqon kara? Waad ku mahadsan tahay
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada degdegga ah, shaki kale oo ka hor inta aanad samaynin shabakada waa inay abuuraan Sawir ah oo ka shaqeynaya tan? ama waxaa jira hab kale.
Gudaha Google Earth Waad ku gudbeysaa tilmaamaha jiirka shaashadda oo hoosta waxaa laguu gudbin doonaa latitude iyo dhaadheer. Haddii aadan arkin, waa la tirtiray, waxaa lagu shaqeynayaa iyadoo la sameynayo «view / status bar»
Wanaagsan sida uu yahay dhererka iyo jawaabta dhulka, tusaale ahaan waxa aan helayaa qiyamka kale ee aan u isticmaalayo si fiican Google Earth.
Mahadsanaansho iyo cudur-daar haddii su'aashu tahay isku celcelis asaasi ah oo asaasi ah
Waxaad iibsanaysaa, version Shakhsiyeed wuxuu ku socdaa hareeraha $ 245.
Wanaagsan waa waxa aan raadinayay, xaggee baan ka soo dejiyey ama helayaa Manifesto GIS?
Si aad u dalbato.
salaanta! Waad ku mahadsan tahay caawimaad aad u badan, hadda waxaan ka heli karaa nidaam sheyga ah Google Earth illaa iyo imika, su'aalo dheeraad ah.